Iwu Mbupu - Pisa Pelle Italian Leather
Anyị ji Egbọ Mmiri Worldwa na FedEx Express na DHL Express
Na ụlọ nkwakọba ihe na Florence, Italytali. Anyị ga-ezitere gị zụrụ gị n’achọghị ogologo oge. Productsfọdụ ngwaahịa ejiri aka mee mgbe ị na-enye iwu. Ndị a ga-ewe ụbọchị ise ọzọ nke ụgbọ mmiri. A mbinye aka a chọrọ n'elu nnyefe.
America: Xbọchị 1-5. Europe: 1-5 ụbọchị. Asia: 5-10 ụbọchị. Africa: 5-10 ụbọchị. Australia: 5–10 ikp.
AKW ISKWỌ NA-EGO NA-EGO NA-EGO NA-EGO.